Wararka Maanta: Sabti, Apr 14, 2012-Hay'adda UNICEF oo Magaalada Muqdisho ka billowday olole lagu tallaalayo Caruurta iyo Haweenka Uurka leh
Hay'adda UNICEF oo Magaalada Muqdisho ka billowday olole lagu tallaalayo Caruurta iyo Haweenka Uurka leh Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Hay'adda daryeelka caruurta dunida ee UNICEF ayaa maanta ka billowday sideed degmo oo magaalada Muqdisho ka tirsan wajigii hore talaal lagula dagaalamayo lixda cudur ee dila caruurta iyo cudurka teetanada oo laga tallaabayo haweenka uurka leh.
Saraakiisha haya'dda UNICEF ayaa sheegay in wajiga koowaad ay ugu talogaleen inay k faa'iideystaan 130,000 oo caruurta da'doodu ka hoosayso shanta sano ah, waxayna sheegeen in ololahan oo dhan ay ugu talogaleen inay ka faa'iideystaan 380,000 oo caruur ah.
Degmooyinka uu tallaalku ka billowday ayaa lagu arkayay shaqaale koox-koox u socda oo tagaya guryaha kuwaasoo waalidiinta iyo dadka kale ee mas'uulka ah weydiisanaya in la tallaalo caruurta da'doodu ka yartay shanta san iyo haweenka uurka leh.
Sidoo kale, xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee MCH-yada loo yaqaan ayaa iyagana waxaa lagu diyaariyay shaqaale iyo tallaal iyadoo ay halkaasna ka qaadanayeen tallaalka hooyooyin iyo caruur fara badan.
Tallaalka hooyada uurka leh oo ah mid looga tallaalayo cudurka kojisada ama teetanada ayaa waxay saraakiisha UNICEF sheegeen inay ugu talogaleen inay ka faa'iideystaan labadiisa waji 331,000 oo haween ah.
Mas'uuliyiinta haya'dda daryeelka caruurta ee Qarammada Midoobay waxay intaas ku dareen in tallaalka ka hor ay sameeyeen wacyi-gelinno ku aaddan in waalidka ay ka tallaalaan caruurtooda oo ay muddo bilooyin ah ka fulinayeen degmooyinka kala duwan ee Muqdisho shaqaale ka badan 500-ruux.
Waa markii ugu horreysay oo ay hay'adda UNICEF ay olole tallaal oo noocan oo kale ah fuliso Muqdisho tan iyo markii ay xoogagga Al-shabaab banneeyeen inta badan degmooyinka gobolka Banaadir bishii Ogoosto ee sannadkii hore.
Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa dowladda KMG ah iyo AMISOM ku eedeeyay mas'uuliyadda weerarrada argagaxiso ee ka dhacaya Muqdisho. Guddoomiyihii Degmada Cabdul-Casiis ee Gobolka Banaadir oo xilkii Wareejiyay kaddib dagaal dhaliyay dhimasho iyo dhaawac 4/14/2012 7:25 AM EST